Somali News 03.18.2021 | KWIT
Guddi goboleed ayaa kulmaya berri si loo dejiyo qiyaasta rasmiga ah ee dakhliga canshuuraha gobolka. Saadaalinta xoogan waxay u horseedi kartaa Jamhuuriyiinta Aqalka inay aqbalaan qorshaha Aqalka Senate-ka ee Iowa si horay loogu socdo canshuur dhimista gobolka. Laakiin wicitaan wicitaan ah oo lala yeeshay wariyeyaasha subaxnimadii maanta, Afhayeenka Aqalka Pat Grassley wuxuu sheegay in sharciga 2018 uu ku jiro jaangooyo in ururinta canshuuraha dowladdu ay tahay inay koraan ugu yaraan 4% ka hor inta aan la bilaabin dhimista canshuuraha. , taxanayaal cashuur dhimis loo balan qaaday ayaa si toos ah u dhaqan galaya sanadka 2023.
Dhaqaalaha meelaha miyiga ah ee 10 Bannaan iyo gobollada Galbeedka ayaa umuuqda inuu ku socdo xawaare rikoodh ah, sida lagu sheegay daraasad bille ah oo laga sameeyo baananka maanta la sii daayay. Isugeynta guud waxay gaartay aqrinteedii ugu sareysay tan iyo markii sahamintu bilaabatay 2006. Isugeynta guud ee Sahanka Miyiga ayaa kor udhaaftay in kabadan 18 dhibic ilaa 71.9 bishii Maarso laga bilaabo Febraayo 53.8. Dhibco kasta oo ka sareysa 50 waxay muujineysaa dhaqaale koraya, halka dhibcaha ka hooseeya 50 ay soo jeedinayaan dhaqaale sii yaraanaya.
Suuqa guryaha adag ee Sioux City sanadkii la soo dhaafay ayaa sii kiciyay 8.5% kor u kac ah qiimeynta guryaha la degan yahay, sida lagu sheegay tirooyin cusub oo ka soo baxay xafiiska qiimeeyaha magaalada. Qiimeeyaha Magaalada John Lawson wuxuu u sheegayaa Sioux City Journal in kororka qiimeynta guryaha badankood ee magaalada Sioux City qeyb ahaan loo aaneynayo dulsaarka dulsaarka hooseeya iyo qiime dhimista guryaha, taas oo kor u qaaday qiimaha sare 2020.